Fiangonan-tsoavaly fantsom-panafody avo lenta
Ny matihanina induction matihanina stainless steel fantsom-barotra teknolojia
Ny tanjon'ity fitsapana fampiharana fanetren-tena amin'ny induction ity dia ho an'ny Induction Brazing Stainless Steel Tubing Joints amin'ny indray mandeha ho an'ny fampitomboana miverimberina.
fitaovana: DW-UHF-10KW milina fanosihosy famokarana basy
Fotoana: 15 seg.
Fitaovana: Mijanona Silv Black Flux
Ny fantsom-batana roa misy fiarahany mifangaro ary peratra alloy dia napetraka manodidina ny andiany. Ny tselatra mainty dia avy eo nampihatra tamin'ny joint mba hanatsara tsara induction bridging process. Ny sangan'asa dia napetraka tao anatin'ny coil helika nandritra ny 15 segondra izay 8 kW an'ny Indonezin'ny herinaratra fanamorana dia nampiharina. Nahatratra 1472 ny tapa-asa°F (800°C) ary maty soa aman-tsara. Ny fitaovana fanamafisam-peo fampidirana HLQ dia manome soso-kevitra ho an'ny fampiharana ity dia ny DW-UHF-10KW induction brazing heater miaraka amin'ny famatsiana herinaratra 10 kW.
Sokajy Technologies Tags brazing, mivonto mifangaro, fivondronana vy tsy misy fotony, brazing baja vy, dingan-drano mikotrika, induction brazing, fanenon-taolana mivaivay, Indoneziana mitatatata tsy misy vy, fantson-drano mikotrika Post Fikarohana